Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Xuquuq Aadanaha. WQ Sharif Cadde
Xuquuq Aadanaha. WQ Sharif Cadde
November 29, 2011 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Xuquuq(qeexid ahaan), ma aha asal ahaan eray Soomaali ah, laakiin badalkiisa oo Soomaali ah lama hayo, sidaa darteed in isaga la isticmaalo laga maarmi mahayo.
Xuquuq, waa eray jamac ah oon kali ahayn. Kalidiisu waa Xaq. Waxaan qormadan ku eegaynaa xuquuda dadka. Waxaan u qaybin doonaa, dhawr xuquuqood.
1-Xuquuqda qof ahaaneed(personal), sida xaqa uu qofku u leeyahay inuu noolaado(Right to Life), inuu xor ahaado(Right to Liberty), iyo xaqa uu qofku u leeyahay wixii addunyo ah ee isagu leeyahay(Right to Proberty). Xuquuqahani waa aasaasi, (basic rights) waana kuwa ugu muhiimsan xuquuqaha oo dhan. Xuquuahani maaha kuwo dawladi bixisay ama dastuur lagu sharaxay. Waa kuwo ka xasilay dhalashada uu qofku dhashayba. Marka ugu horaysa oo uu qofku dhasho ayuu la dhashaa xuquuqahan. Qof kastaayi wuxuu dhashaa isagoo xor ah. Qof kastaayi wuxuu dhashaa isagoo ay dhawrsantahay xaqiisa qof nimo.
2- Xuquuda ama xoriyada siyaasadeed. Xuquudani waa mid inta badan ku xidhan dawaladaha iyo dastuurada ay dajistaan. Xuquudani waa mid xadaysan oo sida aan xusnay ay tahay in dawladu ay fidiso ama aqoonsato, sida xuquuqda codaynta, xoriyada hadalka, in waxaad rabto aad dhihi karto. Waxaa kaloo xuquuqahan ka mid ah, xuquuqda, isu imaatinka(Rights of free speech, Right to assembaly. Etc.). Waxaa kaloo guruubkan ka mid ah xuquuda diinta, ee uu qof kastaayi xaq u leeyahay inuu caabudo wuxuu rabo.
3-Xuquuq bulsheed(group rights). Kuwan waxaa kamid ah, xuquuda horumarka, xuquuda shaqo, xuquuda aayo katalineeed, IWM.
4- Xuquuq sharciyeed, sida xaqa uu qof kastaayi u leeyahay in uu helo sinaanso sharci, in hadii danbi lagu soo oogo uu helo maxkamad caddaalad ah, in aan qofna layska xidhin iyadoo aysan jirin sabab sharci ah oo keenta in qofka xoriyadiisa lagu xadgudbo, (right to heabius corpus). Qofkii la xidho in la mariyo nadaam sharci ah oo hufan( due process of law) IWM.
Xuquuqdan afraad iyo ta sedexaad iyo ta labaadba, dadka qaar baa ku dooda inay gidigood yihiin kuwo siyaasadeed ama dalwadi bixiso( Civil rights and Political rights).Ama hadii si kale loo dhigo, xuquuqo dastuuri ah(Constitutional Rights).
Waxaa kaloo lagu kala sifayn karaa xuquuqaha dadka, labo sifood, 1)Xuquuq togan, oo ah waxa qof xaqiisa ah ee uu samayn karo isagoon cidna idan iyo fasax toona uga baahnayn,( positive tight), iyo Xuquuq dahsoon(negative right). Xuquuqdani waa mid faraysa dadka kale inaysan faro galin qofka xaqiisa, ama laga dhawrasado in loo diido waxa uu qof xaqa u leeyahay.
Xuquuahan weeye kuwa uu adduunku isla qaatay ee lagu shaaciyay qoraalkii Xuquuqul Insaanka ee Caalimiga ah(Universal Human Rights Declaration), sanadii 1948.
Markii aad maqasho iyadoo laga hadlayo xuquul aadamaha(Human Rights), inta badan waxaa loojeedaa qaybta shaqsiyan ka ah, sida quxuuqda aasaasiga ah ee qofka. Wax badan lagama sheego, ku tacadigoodana aad looma buunbuuniyo marka ay timaado xuquuxda ijtimaaciga ah ama guruupka, sida xuquuda horumarka, dhaqaalaha, shaqada, dhaqanka IWM.
Xuquul aadmigu waa wax aad u wayn oo ay tahay in la dhawro. Wax ka wayn majiro oo uu qof dhawrtaayi, xaqa uu u leeyahay dhawrsanaanta naftiisa, maalkiisa iyo xoriyadiisa. Dadka oo dhani, meel kasta oo ay joogaan, way ka siman yihiin baahida ay u qabaan in ay xor u noqdaan, hadalkooda, fikirkooda, ciday lakulmayaan ee ay la sheekaysanayaan, damiirkooda iyo waxa ay caabudayaan ama ay aaminayaan. Xuquuda dadka meel kasta oo ay ku dhaqan yihiinba in la dhawraayi waa geed ka go’an. Sidoo kale qofkastaayi waxa uu xaqa u leeyahay inuu barta oo uu ogaadaayi waa lagama maarmaan si uu u dhawrto sharaftiisa qofnimo. Cidna xaq uma laha in ay ka xayuubiso qof xaqiisa iyadoo aan loo marin wado sharci ah. Sharciga laftiisu waa inuu yahay mid xaq ah, cadaalad ah, loona simany ahay. Hadii marka la helo labadaas arimood ee ah sarraynta sharciga iyo dhawrida xaqa qofka, waxaa abuurmaysa bulsho caafimaad qabta.
La soco qormada danbe oon ku eegi doono sharciga iyo suu ukalo baxo iyo laamihiisa.
Qore Cade Yalax